Waterproof mara ụlọikwuu azu paaki Manufacturers & Suppliers - China Waterproof maa ụlọikwuu azu paaki Factory
Azu paaki Waterproof N'èzí
Adabara azu paaki maka njem n'èzí, picnics, ugwu ịrị, hiking na boating. Ihe 1680D-TPU nke nwere ihe eji egbochi mmiri na akwa nkpuchi ikuku kacha elu na-eme ka o kwe omume maka njem n'èzí. Ikike lita 30 buru ibu na-ejide ihe niile ị chọrọ. O nwedịrị ike ise n’elu mmiri ma bụrụ ihe na - eme ka ndụ gị na - aga n’ihu n’oge dị egwu.
Paaki Waterproof Njem
Akpa njem njem n'èzí, ihe 1680D-TPU, ihe nkpuchi ikuku nke nwere ikuku elu, ikike lita 30. Uzo siri ike nke akpati bu ihe mmiri na-achoghi, na-eyipu ya, ma na-adigide. Okwesiri maka ugwu ugwu, ime njem, njem, mma na ebe ndi ozo.
Waterproof Motorcycle azu paaki
High-quality PVC n'èzí waterproof azu paaki. Ike buru ibu nke lita 40. Ergonomic ebu usoro zuru okè mpụga nghọta usoro. Ezigbo mma maka iji ugwu. Companylọ ọrụ ahụ nwekwara ike ịnye ọrụ ahaziri iji hazie naanị otu ịke.
Igwu Ahụike Ọgwụ Wet Arịrịrị Akpa akpa PVC
Ezigbo akpa mmiri na akọrọ abụghị naanị banyere igwu mmiri. Trenddị ejiji na-acha anụnụ anụnụ na nke ojii na-acha anụnụ anụnụ na nke dị ọcha. Ma ọ bụ igwu mmiri, ahụike, yoga, ma ọ bụ njem, ọ bụ ezigbo nhọrọ. Ihe PVC, lita 30 buru ibu. Nhọrọ kachasị mma maka mmiri na akọrọ Backpacks.
Waterproof akọrọ azu paaki
Anụ mmiri na-enweghị mmiri na-ekpuchi mmiri nke na-eleba anya na ọdịdị na ịba uru. Agbanye ikike 25 lita, echegbula maka ibubiga ókè. N'iji akwa PVC dị elu, na-enweghị mmiri dị irè. Ọ nwere ike ịnagide gburugburu mmiri mmiri dịka osimiri, osimiri, ma ọ bụ mmiri ozuzo. N'akụkụ akụkụ nwere ike igbochi ngwongwo. Iji usoro ihe omimi nke sayensị na usoro mbelata ibu na-enye gị ohere ịme njem ngwa ngwa.
N'èzí egwuregwu waterproof akpa
Uwe mpempe akwụkwọ na-enweghị mmiri, akwa akwa na-eguzogide akwa, na-eguzogide akwa, mmiri na-enweghị mmiri, dị mfe iburu, ma mepee. Ọ nwere ma ịdị mfe nke ojiji na nkasi obi, na-enye gị ohere ịlaghachi ngwa ngwa na nchekwa na oge ọ bụla ị na-eme njem na njem.
A multifunctional n'èzí waterproof azu paaki. Iji arụmọrụ TPU dị elu, mmiri na-eguzogide ọgwụ. Ọrụ mmiri na-adịghị ike, nke kwesịrị ekwesị maka ịrịgo ugwu, njem, ụgbọ mmiri na ọrụ ndị ọzọ dị n'èzí.
Military ozuzo Waterproof azu paaki
Elu-elu 900D-TPU ihe na-egbochi mmiri, ikike 20L, akpa mmiri na-enweghị mmiri nwere mma mkpuchi ndị agha. Ọ ga-abụ onye inyeaka kachasị mma na agha.
N'èzí Waterproof Travel azu paaki
Ulo njem nke mmiri na-eme njem n'èzí nwere ikike 40L siri ike ma na-eguzogide ọgwụ, ọ dịghị mfe imebi, ma dị mfe iji weghachite. Ọ bụ nhọrọ kachasị mma maka njem, ịrị na njem.
TPU n'èzí waterproof azu paaki
Ejiri akpa naịlọn, TPU, na PVC. Isi aru bu ihe eji eme ka mmiri TPU ghara ikpochapu. Enwere akpa n'akuku akpa iji tinye obere ihe, ikike zuru ezu buru ibu ma ọdịdị ahụ juputara. Nke oghere nke akpa adopts a mpịakọta-elu imewe, na size nwere ike ịgbanwe kpamkpam. Mgbanwe iji.